ဆီကွိုင်းယားပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
Natural range of California subfamily en:Sequoioideae
red - en:Sequoiadendron giganteum
ဆီကွိုင်ယားပင်ကြီးများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် တွင် ပေါက်လေ့ရှိသည့် ဆယ့်နှစ် ရာသီ စိမ်းလန်းသော အပင်ကြီးများဖြစ်၍၊ ထင်းရှူးပင်မျိုးတွင် ပါဝင်၏။ ဆီကွိုင်းယားပင်နှစ်မျိုး နှစ်စားရှိရာ တစ်မျိုးမှာ အလွန်ကြီးမားသည့်အပင်မျိုးဖြစ်၍၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ ဆီယယ်ရာ နီဗားဒါး အနောက်ဘက် တောင်ခြေတွင် တွေ့ရှိနိုင် သည်။ ဤအပင်ကြီးမျိုးသည် ပေပေါင်း ၂ဝဝ မှ ၃၅ဝ ထိ မြင့်၍၊ အချင်းပေ ၂ဝ မျှရှိပြီးလျှင် နှစ်ပေါင်း ၁၁ဝဝ မှ ၁၅ဝဝ ထိအသက်ရှည်ကြသည်။ အခြားတစ်မျိုးမှာ သစ်နီပင် မျိုးဖြစ်၍၊ သစ်နီပင်က သစ်သားကို ပရိဘောဂများပြုလုပ်ရာ၌ များစွာ အသုံးပြုကြသည်။ သစ်နီပင်ကြီးမျိုးကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ကမ်းခြေတစ်လျှောက် တောင်တန်းများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ထိုသစ်ပင်ကြီးမျိုးသည် တောနက်များ၌လည်း ပေါက် တတ်ကြသည်။ သီးခြားသစ်ပင်အုပ်များ၌လည်း ပေါက်တတ်ကြ သည်။ ပေါက်သည့်အပင် အရေအတွက်မှာ နည်းပါး၏။ ဤ အပင်ကြီးမျိုးကို ခရစ် ၁၈၅၂ ခုနှစ်ခန့်က စတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြ သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ၌ကား ၁၈၅၃ ခုနှစ်ခန့်တွင် ဆီကွိုင်ယား ပင်ကို စတင်စိုက်ခဲ့ကြသည်။ ဆီကွိုင်ယားပင်မျာသည် ကြီးမား တင့်တယ်သောကြောင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ထိုအပင်ကြီးမျိုးကို အများအပြား စိုက်ပျိုးကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းရှိ ခြံများ နှင့်ဥယျာဉ်များတွင် ဆီကွိုင်ယားပင်များကို တွေ့နိုင်လေသည်။
ပင်ရင်းဒေသများတွင် ဆီကွိုင်ယားပင်သည် တောက် ပြောင်သော သစ်ကြံပိုးရောင်ရှိ၍၊ ဖြောင့်စင်းသည့် ပင်စည်များ လည်း ရှိတတ်ကြသည်။ ပေပေါင်း ၁၈ဝ မျှတိုင်အောင် အကိုင်းအခက်များ မရှိဘဲ၊ စင်းလုံးချော ပင်စည်ကြီးများရှိသဖြင့် ရှုချင်စဖွယ်တင့်တယ်လှပ၏။ အဖျားဖက်တွင် ရှူး၍လုံးဝန်း လျက်၊ ရှည်၍ချွန်သော အမြဲစိမ်းအရွက်များရှိ၏။ အပင်အိုကြီး တို့၏ ထိပ်ဖျားများသည် ဆီးနှင်း၏ အလေးဒဏ်နှင့် လေပြင်း တိုက်ခတ်သည့်ဒဏ်ကြောင့် ကျိုးပဲ့လျက်ရှိတတ်သည်၊ အကြီးဆုံးအပင်ကြီးများကို လှဲ၍သက်ရစ်များကို ကြည့်ရ ခြင်းအား ဖြင့် ထိုအပင်များ၏ အသက်သည် နှစ်ပေါင်း ၁၁ဝဝ မှ ၁၅ဝဝ အတွင်းတွင် ရှိကြောင်းသိရလေသည်။ ထင်ရှားသည့် ဆီကွိုင်ယားပင်ကြီးတစ်ပင်၏ အချင်းမှာ ၉၃ ပေမျှရှိသည်။ ကြီးမားသော အခြားအပင်ကြီး တစ်ပင်၏ အောက်ခြေတွင် လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုကို ဖောက်လုပ်ထားရာ၊ ထိုလိုဏ်ခေါင်းတွင်းမှ မြင်းစီး သမားတစ်စုပင် ဖြတ်သွား နိုင်သည်။ ထိုသစ်ပင်ကြီးမျိုး၏ အသားမှာ အနီရောင်ရှိ၍ ပေါ့ပြီးလျှင် အလွန်ခိုင်မာသည်။ ယခုအခါဆိုင်ရာ အစိုးရများ က ထိုအပင်မျိုးကို မလှဲရန် အမိန့်ထုတ်ထားလေသည်။ သစ်နီပင်မျိုးများသည် ကမ်းခြေတစ်လျှောက် နှင်းပိတ် အောင်ကျသောသစ်တောများ၌ ပေါက်ရောက်လေ့ရှိကြသည်။ အရွက်များသည် ထင်းရှူးပင်အရွက်နှင့်တူ၍၊ ဘေးဘက်သို့ပြန့် ကားနေတတ်သည်။ တစ်လက်မခန့်ရှိ ကတော့ပုံအသီးများကို အခိုင်လိုက် သစ်ပင်၏ အဖျားတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထိုသစ်နီမျိုးမှာ အမြင့်ပေ ၁၁ဝ ကျော်မျှ ရှိတတ်သည်။
↑ "Sequoia sempervirens" (2013). IUCN Red List of Threatened Species 2013. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T34051A2841558.en.
↑ NatureServe. 2020. Sequoia sempervirens, Redwood. NatureServe, Arlington, Virginia. Available https://explorer.natureserve.org/Taxon/ELEMENT_GLOBAL.2.140518/Sequoia_sempervirens. Accessed 11 November 2021.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆီကွိုင်းယားပင်&oldid=718195" မှ ရယူရန်
၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။